Linux 5.4 ichaita kuti mimwe mitambo mitsva yeWindows ishande paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, Linus Torvalds yakaburitsa Linux 5.3. Iyo nyowani vhezheni yekernel yauya nemazhinji maficha maficha, mamwe acho, senguva dzose, muchimiro chekutsigira Hardware nyowani, asi yababa veLinux iyo yatopfuura. Parizvino iwe wakanangidzirwa pane Linux 5.4, chinotevera chinotevera chakatovhura iyo kukumbira hwindo yeiyo inosanganisira vhezheni yeLinux kernel iyo inosvika pakati paNovember.
Haisi chakavanzika chekuti Linux haisi iyo yakasarudzika chikuva yevanogadzira mutambo, asi zvakare hazvisi zvekuti uye akawanda mazita ari kuwedzerwa isu, chikamu nekutenda kumapuratifomu akaita seSteam. Dzimwe nguva mitambo haishande pane linux uye izvi zvichavandudza, muchidimbu, muLinux 5.4 nekuda kwechigamba chichauya kubva muruoko rweCodeWeavers icho chinobatsira mamwe maWindows nemitambo ye64bit kumhanya zvirinani muWine nemamwe marudzi esoftware akadai seCrossover kana Proton. Vakuru vanobatsirwa vanozove vashandisi veIntel uye AMD zvishandiso.
Linux 5.4 ichave yakati wandei kune ma gamers
Shanduko yakaunzwa (kuburikidza Phoronix) muCodeWeavers chigamba ichawedzera kutsigira kutsigira kweSGDT, SIDT uye SMSW mirairo (Chengetedza Global Rinojekesa Tafura Rejista, Chitoro Kupindirana Descriptor Tafura uye Chitoro Mashini Mamiriro Enyika zvichiteerana). UMIP (Mushandisi-Mamiriro Ekudzidzisa Kudzivirira) mashandiro pane zvazvino processor inodzivirira iyi mirairo kubva mukumhanya mumushandisi modhi. Dambudziko nderekuti mirairo iyi inowanzo shandiswa neWindows zvirongwa uye inogona kuunza matambudziko kana ichiitwa munzvimbo dzakadai seWine.
Iyo yakakosha kodhi UMIP Iyo yatove yakapa kuraira kuteedzera kwe32-bit maitiro, neine Linux 5.4, SGDT, SIDT, uye SMSW yakafukidzwa kwema 64-bit maitiro. Izvi zvinobva zvabatsira mamwe ma64-bit Windows mitambo inoenderana nemirairo iyi. Pasina iyi rutsigiro rwekuteedzera, iyo mitambo yaive ichirovera maCUU achangoburwa nekugumburwa pamusoro pemirayiridzo yakakanganiswa.
Pakati pemitambo inobatwa nedambudziko iri uye inogona kushanda muLinux 5.4 isu tine:
Mumvuri weTomb Raider.
Dhiabhorosi Anogona Kuchema 5.
Chikwata Sonic Mujaho.
Naizvozvo uye kunyangwe Linux isingazombove Windows (tenda kunaka), Linux 5.4 ichave yakati wandei kune ma gamers.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.4 ichawana kuenderana nemamwe emitambo mitsva yeWindows